Baarlamanka dalka oo maanta ajanadaha ka saaray mooshin ka dhan wasiiradii hore (Dhegeyso) – Radio Daljir
Janaayo 14, 2014 6:08 b 0
Muqdisho, January 14, 2014 – Baarlamanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta diiday inay meel-mariyaan mooshin ka dhan ah soo celinta qaar wasiirada xukuumadii ra?isal wasaare Saacid iyagoo weliba si buuxda u laalay mooshinka xataa in laga doodo.
Prof. Maxamed Sheikh Cusmaan jawaari ayaa gudoominayey kulanka baarlamanka ee maanta, wuxuu shaaciyey natiijada cod qaadista oo ahayd mid gacan taag ah xili maanta lagu balansanaa.
113 mudane oo ka tirsan baarlamanka ayaa cod gacan taag ah ku soo jeediyey in gebi ahaanba mooshinka la laalo, halka 99 kale oo ka tirsan baarlamanka ay oggolaadeen in mooshinka laga doodo.
Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed sheikh Cismaan ayaa ku dhawaaqay in mooshinka laga saaro gebi ahaanba ajandaha baarlamanka dalka. ?waa jiraa mooshin isoo gaaray oo lagu difaacayo wasiiradii hore inay soo noqon karaan.? Ayuu Jawaari xaqiijiyey.
?Mooshinku weli wuu taagan yahay ma burin, waxaan rajaynaynaa inuu guulaysto fadhiga dambe, hadii qaar la tashkiilyey anaguna waan tashkiilin doonaa.? Xildhibaan Cabdinaasir Gaarane oo ka mid ah xubnaha mooshinka keenay ayaa sidaas u sheegay Radio daljir
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheikh Axmed Maxamed ayaa dhowaan laga sugayaa inuu soo magcaabo wasiirada cusub ee xukuumadiisa, in kastoo wakhtiga magcaabista loo kordhiyey hadana weli waxaa jira muran siyaasadeed oo qarsoon oo la xiriira magcaabista wasiirada.
Dhegeyso:? Cabdulaahi Maxamed Suldaan oo daljir ka tirsan ayaa war-bixintan hoose ku eegi doona